Wonke umuntu okungenani kanye, makabe ezwa ngaleyo nto ngokuthi "ukungavinjelwa kwesijeziso." Ngokwemvelo, ixhunywe ne-lawprudence, kanye neminye imiqondo eminingi ehlobene nomthetho kanye nokuhleleka. Ukuqonda lesi sihloko, udinga ukumnika ukunakwa okuncane.
Umqondo onjalo, njengokungavinjelwa kwesijeziso, wavuka ngisho nasenkathini yeRoma lasendulo. Futhi isimiso sakhe sasimiswe ngokucacile futhi ngokucacile. Abameli baseRoma babenesiqiniseko sokuthi ukuphumelela kwalokhu noma leso sijeziso akuyona inkohlakalo enkulu njengoba kungenakwenzeka. Okungukuthi, ngokuhamba kwesikhathi umlandu uzotholakala futhi ujeziswe ngokulunga.
Yiqiniso, kubalulekile futhi ukuhambisana nezici ezithile. Okokuqala, okubaluleke kakhulu, ukuthembeka komthetho wenqubo. Kubalulekile ukufakazela ukuthi unecala lomuntu oyisigebengu ngempela, futhi ungavumeli ukuqondisa, ngenxa yokuthi isakhamuzi esihle siyakwazi ukuhlupheka. Lokhu kusho isici sesibili, esitholakala ekuphenyweni kwezimo kanye nobuchule. Futhi into yesithathu okufanele icatshangelwe yisimo sezombangazwe jikelele ezweni, okungenza kube lula noma kuvimbele ikhomishini yobugebengu.
Lo mqondo ukhuluma ngokuqondile esihlokweni esinjengokungavinjelwa kwesijeziso. Ukuhlelwa kwesigwebo kugcizelela ukuhambisana nomgomo wokubheka. Futhi kunikezwa ukuncintisana. Lena inqubo lapho iqiniso livezwe khona. Zombili izinhlangothi - zombili ummangali nomshushisi - banamalungelo alinganayo ngokuphelele kulolu cala. Bonke ubufakazi kumele baphenywe ngokuqondile, ummeleli weqembu ngalinye kumele asho isikhundla sakhe futhi ameme ofakazi.
Inqubo yomthetho inzima kakhulu. Futhi kunzima - ohlelweni lokuziphatha. Ummangali uphinde wagxilizelwa ukungaqiniseki kwesigwebo. Futhi akuwona wonke umuntu ongavikela amalungelo akhe futhi azivikele ngokuzimela enkantolo. Yingakho umthetho uhlinzeka ukuthi kungenzeka ukuthatha usizo lommeli.
Kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi kukhona indawo engeyona kuphela isimiso sokungavinjelwa kwesijeziso. Kukhona into enjalo njengesikhathi esifike ngesikhathi. Emthethweni wezomthetho, kunezinkambiso ezibeka ukunciphisa izenzo. Lesi yisikhathi esinqunyiwe lapho isigebengu sifuna khona ukuze sibeke icala.
Uma kwenzeka ukuthi umuntu onecala atholakale, kodwa ukulinganiselwa kwezenzo sekuphelelwe yisikhathi - abakwazi ukumbonisa lutho. Lokhu kungaholela abaningi ukuba bajabule, ngoba kuthiwa ekuqaleni kwakutshelwe ngomgomo wokungavinjelwa kwesijeziso nokubaluleka kwayo. Kodwa empeleni, konke kulula. Ekuqaleni akuyona isijeziso, kodwa ukugcinwa komphakathi. Uma umuntu otholiwe, owake waphula umthetho, akabe esenza ubugebengu futhi eziphatha njengesakhamuzi esihloniphekile, ngakho-ke akusizi ngalutho ukumjezisa ngesenzo sokugcina.
Kodwa-ke, ama-ejensi okuphoqelela umthetho kanye nomthetho unikeza uhlu lwezenzo ezimbi kakhulu. Kubo, akekho isimiso sokulinganiselwa. Futhi kufanele zibalwe.
Ubugebengu obukhulu kakhulu
Ngakho, kulesi sigaba kukhona, okokuqala, izenzo zobuphekula, kanye nokuthatha impi. Ezingxenyeni 4 ze-211, kuthiwa akukho mithetho yokulinganiselwa kwezobugebengu ezinjengezokuthunjwa komkhumbi wamanzi noma wamanzi.
Ukulungiselela, ukuqhuba, ukuhlela kanye nokulwa kwempi nakho kubhekwa ikakhulukazi ubugebengu obubi kakhulu. Njengokusetshenziswa kwezindlela ezingavunyelwe zezombusazwe. Futhi akukho mkhawulo wesikhathi sokuqothulwa kohlanga kanye ne-ecocide.
Kodwa kuthiwani ngokubulala? Izigebengu ezilahlekelwe ukuphila komunye umuntu, kunesikhathi sokunciphisa. Uneminyaka engu-15 ubudala. Kubulawe okuyilo leli gama kusebenza futhi. Ngendlela, ukuhlola nokusabalalisa / isitoreji / ukukhiqizwa kwezinto ezidakayo. Inkathi "eguquguqukayo" kakhulu isethelwe lobugebengu obufana nokuba. It isukela eminyakeni emibili kuya kweyishumi (kuye ngokuthi imininingwane yecala).
Ngeshwa, njengoba izibalo zobugebengu zibonisa, inani lamacala awenziwe landa kakhulu ngonyaka odlule. 2015 kwakunzima ekubhekeni komnotho, ngakho akumangalisi ukuthi izakhamuzi zaqala ukweba ngokuphindaphindiwe ukukhwabanisa kwezezimali.
Izibalo zobugebengu zamenyezelwa ekuqaleni konyaka wamanje wezi-2016. Inani lokuphulwa landa ngo-8.6%. Uma sihumusha konke kumanani aqondakalayo, yilokhu okushiwo: ngo-2014, amacala angu-202,100 ayenziwe ngaphansi kuka-2015.
Cishe angu-46% kukhona amacala okuba impahla yomunye umuntu. Ukuphanga kuka-996,500, ukuphanga okungu-71 100 kanye nokuphanga abangu-13 400. Idatha enjalo yaholela ngoJanuwari 2016 uMnyango Wezangaphakathi ZaseRussia Federation. Ngeshwa, inani lamaphekula lenyukile ngesithathu. Ngonyaka ka-2015, kunezingaphezu kuka-35% (amacala angu-1,531) kunama-2014.
Futhi kwaba khona nokwanda kwezinguquko. Ngonyaka odlule isibalo sokubonakaliswa kwawo senyukile ngo-27%. Kodwa kwakukhona izenzo ezimbalwa ezihlokweni "ezinzima". Inani lokubulala lawela ngo-6%. Izigebengu ezinobungozi obukhulu empilweni nazo zancipha ngo-7.2%.
Mayelana nokuthi izigebengu zithwala isijeziso esifanelekile, ungakhuluma isikhathi eside. Kodwa lokhu sekukhona esinye isihloko, okungenani, sinomlingiswa wezenhlalakahle, hhayi lomthetho. Ngakho ekugcineni ngingathanda ukuphawula, yiziphi izinyathelo zethonya lobugebengu-zomthetho ezamukelwayo. Lezi zenzo (hhayi izijeziso) esetshenziswe iziphathimandla ngokuphathelene nabantu abanecala ngesenzo esithile.
Ngokuvamile lezi yizinyathelo eziphoqelekile zezokwelapha. Ukwelashwa esibhedlela esibhedlela, isibonelo, esetshenziselwa abahlukumezi abenza isenzo esiyingozi emphakathini. Kungabuye kuthathwe impahla, izinyathelo zezemfundo, ukuvinjelwa kwamalungelo (isikhathi esimeme). Noma kunjalo, into ebaluleke kakhulu ukuthi umenzi wobugebengu akagcini nje ukukhonza isigwebo sakhe, kodwa futhi ufunda isifundo esiwusizo futhi uthatha indlela yokulungisa.